Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Duran Kalkan
Duran Kalkan waa Xubin ka tirsan Guddiga Meel-marinta iyo hogaamiyaha sare ee ururka PKK. Wuxuu mas’uul ka ahaa weerarkii ay ku dhinteen toddoba askari oo ka tirsan ciidamada wadanka Turkiga oo dhacay bishii Diseembar ee sanadkii 2009. Sidoo kale Kalkan wuxuu u magaaban yahay Waaxda Hanti-dhowrka.
Xisbiga Shaqaalaha ee Kurdistan (PKK), oo sidoo kale loo yaqaan Kongra-Gel waa urur argagixiso oo gobol ahaan firfircoon oo dowladda Mareykanka waxay u aqoonsan tahay inay yihiin Urur Argaggixiso Shisheeye [Foreign Terrorist Organization] (FTO). Ururka PKK ayaa waxay bartilmaameed ka dhigtay saraakiisha dawladda Turkiga, bilayska iyo ciidamada amniga ayna si ula kac ah u dhaawacmeen ayna dileen dad rayid ah. Ururka PKK waxay isticmaashaa shabakadaheeda iyo dhaqdhaqaaqa dambiyada oo Yurub oo dhan ku wada baahsan si ay u helaan hub iyo qalab. PKK waxay isticmaaleen bamamka isqarxinta, gawaarida gaari-gacmeed ee miino macmal ah ee loo adeegsado qaraxyada (VBIEDs), iyo xeelado kale oo si ula kac ah oo aan kala sooc lahayn oo argaggixisanimo loo isticmaalo. Sidoo kale ururka PKK waxay qortaan oo maskaxda ay ka xadaan dhalinyarada, mar marka qaarkood afduubka, oo ay u shaqeeyaan xag dagaal. Sannadkii 1993kii ururka PKK wuxuu afduubtay 19 dalxiisayaal oo reer Galbeed ahaa oo ay ku jireen Ameerikaan iyo sanadkii 1995kii laba qof oo Ameerikaan ahaa ayaa ku dhaawacmay qarax bambo oo ay geysatay ururka PKK.
Sannadkii 2015kii iyo 2016kii, sanadkii ururka PKK ayaa ballaarisay weerarradii oo waxay ku baahisay dadlka Turkiga, xarumaha magaalo-weynta, iyo meelaha dalxiiska ah ee ku yaala xeebaha Aegean iyo xeebaha badda Mediterranean ee dalka Turkiga. Bishii Agoosto 2016, kooxdu waxay sheegatay weeraro bambaano ah oo lala beegsaday saldhigga guud ee bilayska Sirnak, iyagoo dilay 11 ruux oo isla markaana ku dhaawacay in ka badan 70 ruux. Bishii Juun 2017, ururka PKK waxay weerar ku qaaday kolonyo ciidan oo Turki ahaa oo koonfurta bari ku sugnaa, iyagoo dilay in ka badan 20 askar. Tan iyo sannadkii 2015, kooxdu waxay mas’uul ka ahayd dhimashada in ka badan 1,200 oo mas’uuliyiinta ammaanka Turkiga ah iyo dad rayid ah.
Sanadka kale ee loo maleeyo inuu dhashay. Taariikta Dhalashada [TDH] (DOB):
Lambarka Aqoonsiga Turkiga:
Wasaarada Arimaha Dibadda FTO: 8da, Oktoobar, 1997
SDNTK: 20 Abriil, 2011
Liiska kuwa la-Raadinayo: